Nchedo klaasị mbụ nke ihe egwu - Magazin "Usoro nduku"
в Na-elekwasị anya
Isiokwu adịgboroja na ahịa ngwaahịa nchekwa osisi (ọkachasị n'ọnọdụ ebe ndị na -emepụta ugbo na -ama ụma zụta ma jiri ọgwụ adịgboroja ma ọ bụ nke edeghị aha na Russia) abụghị otu n'ime ndị a na -atụle nke ọma na mbara oghere: ndị mmadụ achọghị ịdọrọ uche. nke ndị na -ahụ maka iwu, mana echela mgbe niile banyere ihe ọghọm dị.
N'ime afọ abụọ ma ọ bụ atọ gara aga na mpaghara ndịda Russia, dị ka data na-akwadoghị, enweela mmụba na mmasị ndị ọrụ ugbo na pesticide nke klaasị ihe egwu mbụ isophenphos-methyl. Ndị ọrụ na -akwadoghị, n'ihi na na Russia enweghị ọgwụ edebara aha dabere na ihe a, mana na mkparịta ụka "na -enweghị dictaphone" ndị ọrụ ugbo na -akwado ozi a.
"Nke a buru oke ibu, ọ dị ka ọkụ na ndịda anyị," otu n'ime ndị na -akọ ugbo na -akọrọ onye nta akụkọ "Potato System" echiche ya. ...
O doro anya na ọgwụ ahụ enweghị aha kachasị mma n'ihe banyere nchekwa maka onye na-azụ ya, n'agbanyeghị na n'eziokwu enwere ntakịrị ozi a pụrụ ịdabere na ya, ọ bụla agadi ọgwụgwọ: isophenphos-methyl bụ nke mbụ edebara aha na 1975.
Dabere na data nke akwụkwọ akụkọ Rosselkhoznadzor nyere akwụkwọ akụkọ ahụ, a na-ahụ isophenphos-methyl site na nnukwu nsí na-egbu egbu maka mmadụ (LD50 21,52 mg / kg). Pụtara na mgbasa n'otu oge ya na isophenphos, agbanyeghị, mmetụta a na-enwe ogologo oge nke mmetụta ya n'ahụ mmadụ anaghị amụcha nke ọma. Isofenphos na isophenophos-methyl bụ nke United States Environment Protection Agency (US EPA) na-ekewa dị ka ihe egwu. Dabere na usoro nyocha usoro nke US National Toxicology Programme mepụtara, a na -edepụtakwa ọgwụ ndị a dị ka ndị na -akpaghasị endocrine. Na European Union, a na -ahụ ihe ndị a dị ka "ihe mgbe ochie". Na China, isophenphos-methyl, yana ọgwụ ndị ọzọ na-egbu egbu nke ukwuu, na-eji nwayọ wepu mgbasa.
Kedu ihe na -adọta ndị ọrụ ugbo nke oge a n'ọgwụgwụ ọgwụ dị oke egwu?
Dabere na Konstantin Onatsky, onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na onye njikwa ngwaahịa FMC, isophenphos-methyl malitere iji ya na mpaghara Volgograd, Rostov na mpaghara mpaghara ndịda Russia ndị ọzọ, na-anwa iwepu ihe ụtaba na eyịm. Ọ bụ ezie na ọkachamara ahụ kwenyesiri ike na ihe isi ike ndị dị n'ịlụso ọrịa a ọgụ abụghị n'ihi enweghị ọgwụ dị irè na nke akwadoro n'ahịa, kama ọ bụ enweghị ike iso ha rụọ ọrụ (enweghị nrube isi n'iwu).
Ojiji nke isophenphos-methyl, site na echiche onye ọkachamara, na-eburu ya nnukwu ihe egwu maka ụlọ ọrụ (na mgbakwunye aha na iwu). Konstantin Onatsky kwuru, "Nke a bụ ọgwụ ndị China mere, anyị amaghị ihe adịghị ọcha o nwere na mgbakwunye na ihe na-arụ ọrụ, mana ha nwekwara ike bụrụ nsí, yana kedu ihe dị ize ndụ ha maka mmadụ na ọdịbendị, ogologo oge ha ga -anọgide n'ime ala na otu ha ga -esi eme ihe. maka ịgha mkpụrụ n'oge na -abịa amaghị. "
A na -edekọ okwu mgbe ọgwụgwọ ọgwụ adịgboroja na -ebute mmebi osisi, yana ọbụna ọnwụ nke ihe ọkụkụ, na Russia kwa afọ.
Ka anyị ghara ichefu na iji ọgwụ ahụhụ na-adịchaghị mma na-emebi gburugburu ebe obibi (na-ebute mmetọ ala, mmiri ala na mmiri dị n'elu), ma na-emetụta ahụike nke ndị na-eri nri.
Agbanyeghị, nke a anaghị akwụsị onye ọ bụla: dị ka otu ndị Russia na -emepụta kemịkalụ kemịkalụ kemịkalụ si dị, na mpaghara ụfọdụ, ahịa ọgwụ adịgboroja na adịgboroja ruru 30%.
Otu n'ime ihe kpatara ya bụ nnweta ụdị ọgwụ a. Mgbasa ozi maka ire otu isofenphos-methyl nwere ike dị mfe na netwọk mmekọrịta na ndị ozi ozugbo.
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision (Rosselkhoznadzor) bụzi ọrụ maka ileba anya na mbubata ọgwụ ahụhụ na agrochemicals na mpaghara Russia, yana idebe ụkpụrụ maka ojiji ha na -emepụta ihe ubi. Mana nzukọ a na-arụ ọrụ ndị a naanị site na June 29 nke afọ a, kemgbe mwepụta nke mbipụta ọhụrụ nke Iwu Federal No. 109-FZ “Na Idozi Pesticides na Agrochemicals”.
Site n'ụbọchị a gaa n'ihu, ọgwụ niile na-egbu ahịhịa na agrochemicals na-abanye na obodo anyị site na ụfọdụ ebe nyocha (enwere 14 n'ime ha), nwere ngwa pụrụ iche na-enye gị ohere soro olu na ịdị mma nke ngwaahịa mbubata.
N'otu oge ahụ, ikike nke Rosselkhoznadzor anaghị agụnye njikwa ọgwụ ahụhụ na agrochemicals enyere anyị site na mba ndị so na Eurasian Economic Union, na nke a bụ mgbọrọgwụ nsogbu ahụ. Dika nchoputa nke ndị ọkachamara na -ahụ maka ọrụ si kwuo, ndị na -emepụta China n'afọ ndị na -adịbeghị anya ebidoghachila inye ọgwụ ndị ewepụrụ na mgbasa na Middle Kingdom n'ahịa ahịa adịghị mma nke mba Central Eshia, ebe ọgwụ ndị a na -esi na Russia banye ngwa ngwa. Site n'ụzọ, dị ka ihe ndị ọrụ ugbo kwuru, isophenphos-methyl si aga n'ụzọ a: site na China ọ na-aga Kazakhstan, ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ọ na-aga n'ọhịa ndị Russia.
"N'ọnọdụ nke ókèala mepere emepe n'etiti mba ndị otu nke Eurasian Economic Union, ọ gaghị ekwe omume ịhụ na ịdị irè nke ịgbasa mgbasa nke ọgwụ ahụhụ na agrochemicals naanị site na mbọ Rosselkhoznadzor," ngalaba ahụ kwuru maka ọnọdụ ahụ.
Iji gbochie ụzọ ọgwụ na -edeghị aha na nke adịgboroja, a chọrọ mkpebi izugbe nke EAEU, ndị otu ahụ ekwuola nhọrọ ndị ga -ekwe omume (ọkachasị, enwere nzukọ na isiokwu dị mkpa na saịtị nke Eurasian Economic Commission na August 4), mana akwadobeghị atụmatụ Rosselkhoznadzor.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị naanị ọgwụ na -egbu egbu nke sitere na ọdịnaya, kamakwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri toro site n'iji ha eme ihe, na -eyi ahụike ụmụ amaala egwu.
Nke mbụ, anyị na -ekwu maka akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ebubata, mpịakọta nke ngwa ahịa ha na Russia maka ọtụtụ aha etoola nke ukwuu n'afọ gara aga. Dị ka ị maara, ugbu a, mgbe a na -ebubata n'ime obodo, a naghị enyocha ngwongwo ndị a maka ọdịnaya pesticides na agrochemicals fọdụrụ, mana a na -enyocha nke ọma nke ọ bụla maka ọnụnọ nke iche iche maka EAEU. Ndị na -emepụta ihe, na -atụ egwu nlọghachi nke ngwongwo, na -ama ụma na -abawanye ọnụego nhazi, a na -enye ngwaahịa ndị a n'ụlọ ahịa ndị Russia n'efu.
Ngwọta maka nsogbu a, site na echiche Rosselkhoznadzor, kwesịrị ịbụ iwebata mmezi nke iwu na njikwa njikwa ọgwụ na agrochemicals, na -enye ụlọ ọrụ ikike maka ụdị njikwa a na ụkpụrụ "site na ubi iji zụọ ahịa ", gụnyere maka ngwaahịa ndị esitere na mba ndị ọzọ ebubata.
“Njikwa nhọrọ maka nchekwa nke ngwaahịa emepụtara ozugbo site n'aka onye nrụpụta ma ọ bụ n'oge mkpochapu ngwa ahịa nke mbubata tupu ekewaa ha n'ime obere nza wee gaa ire ere bụ naanị usoro ga -ekwe omume maka igbochi mgbasa nke ngwaahịa adịghị mma yana ịchọpụta ndị nrụpụta na ndị mbubata. ekwenyeghị n'iwu iji ọgwụ ahụhụ ", - ndị ọkachamara nke Rosselkhoznadzor kwuru.
O siri ike ikwu ma a ga -agbasa mpaghara ọrụ nke Ọrụ ahụ. Ekwesịrị ichetara na ruo afọ a Rosselkhoznadzor enweghị ikike ileba anya ntụgharị ọgwụ na -egbu ihe ruo afọ iri.
Gburugburu ụwa Trimble: teknụzụ nke ihe ịga nke ọma ugbu a